Madaxweyne Gaas oo ku baaqay in dastuurka Soomaaliya laga daayo Fara-galinta – Radio Daljir
Abriil 11, 2015 6:33 b 0
Sabti, Abriil 11, 2015 (Daljir) —Hadalkan ayuu madaxweynuhu ka sheegay shir wada tashi ah oo u dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Puntland ,kaasi oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland.
Madaxweyne Cabdi wali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid looga hadlayo heshiisyadii horey u dhax-maray labada dhinac iyo in laga wada hadlo hiigsiga 2016-ka oo dowladda hadda jirta ay ku shaqaynayso ,xili u jiro mad-madow u dhaxeeya labada dhinac.
‘Waxaan aaminsan-nahay in dastuurka ay ku socoto fagasho tira badan,waana in dastuurka fagashadda laga daayo,waxa la badalayo waa inay noqdaan wax la isla og yahay’ayuu yiri madaxweynaha oo shaki ka muujiyay isbadalada lagu sameeyay dastuurka.
Ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo isna shirka ka hadlay ayaa sheegay in wada hadaladan laga filayo in ay noqdaan kuwa mira dhal ah ,isla markaana diiradda la saari doono sidii xal loogu heli lahaa khilaaf-yada yar-yar ee labada dhinac ka dhaxeeya.
Waxaa uu raysul-wasaaruhu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo Puntland uu horey uga dhaxeeyay xiriir wanaagsan ,isla markaana la sii anba qaadi doono heshiisyadii horey loo gaaray iyo sidii loo hirgalin lahaa.
Arimaha ugu muhimsana ee shirka lagu soo hadal qaaday ,waxaa kamid ahaa maamul u samaynta gobollada dhexe ee Soomaaliya ,waxaana madaxweynaha Puntland uu shirka ka sheegay in aysan ka soo horjeedin hirgalinta maamulka gobollada dhexe hadii hab sharci ah loo marayo.
Shirka wadatashiga Puntland iyo dowladda Somaliya oo ka Furmay Garowe